Icandelo lokulingwa kwezeNtlalo, Icandelo loNyango lobuGcisa | Martech Zone
Icandelo lokuLinga kwezeNtlalontle, Icandelo loNyango lobuGcisa
NgeCawa, nge-13 kaJanuwari 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Le veki ibingumceli mngeni omkhulu emsebenzini. Ndiqinisekile ukuba ndisebenze ngaphezulu kweeyure eziyi-100- kwaye khange ndisondele ndibeke isifotho kuluhlu lwam lwezinto ekufuneka zigqityiwe.
Ngenxa yengqondo, ndihlala ndizama ukwahlula izinto ekufuneka ndizenzile kwaye ndenze into eyahluke ngokupheleleyo. Inxalenye yobuntu bam - umhlobo wam uPat uyibiza ngokuba yeyam inkosikazi.
Kwiveki okanye edlulileyo ndadibana nomhlobo wam ukuxoxa ngokwakha indawo entsha kodwa ndisebenzise Kwi-Twitter API ukwenza inyani. Inkosi yam entsha Ukuba Uyaphumelela.
Ndidinga ukufunda i-API ye-Twitter, kuqala, nangona kunjalo. Kule mpelaveki ndenze nje lonto. Ukuba Uyaphumelela sisicelo esincinci sokukhangela esiya kukhangela nantoni na efunxa Uphando. Elona candelo lipholileyo, nangona kunjalo, kukuba liyaligcina inani labantu abathi bathabathe!
Iindwendwe, ubukhulu becala, ziziphatha kakuhle. Ndiqalise uluhlu lokucoca amagama kunye namabinzana, kunye noluhlu lokucoca ulungiso kwezi dilesi ze-IP ezingayi kuyeka ukuba krwada. Ndiyabulela noburharha iindwendwe ezinazo- ndinyanisile phakathi kwe-iPhone kunye ne-iPod Touch. (Uphuculwe ekubeni phakathi kuka-Ann Coulter noHillary Clinton ekuqaleni kwempelaveki.) Kwaye kunjalo, eyokuqala uyafunxa pops up amaxesha ngamaxesha.
Ukuthumela kwi Ukuba Suck iakhawunti ye-Twitter Kwakunzima kancinci. Kodwa eyona nto inzima yayikukwakha iindlela zokutsala iiTwitters ezibhalwa ngabanye abantu emva kwiwebhusayithi ethi Suck. Ukwenza, ndinomsebenzi weCron ojonga ifayile Twitter API umzuzwana ngamnye kunye neerekhodi ziqinisekisa nganye ye Tweets buyela kwisiza, urekhoda nayiphi na emitsha.
Ukuba unqwenela kwi-Twitter into ocinga ukuba iyasondela, vele uphonsa i-tweet ku @ifsuck. Ukuba ufuna ukubukela okufunxa imini yonke kunye nangalo lonke ixesha (URon Paul ngu # 1), ndwendwela Ukuba Uyaphumelela.
Kucacisiwe kuGoogle amaXwebhu
Jan 14, 2008 ngo-9: 35 PM
Inqaku elipheleleyo kukuqokelela oko abantu bakubeka kukhangelo lwewebhu kwaye ubabize ngokupheleleyo kwaye kutshanje? Ukuba iscript sakho kufanele ukuba sikhangele "umtya", ayenzi loo nto. Ukuba liqhinga nje lokuba abantu balisebenzise (kwaye ke, lisebenze kum) ukubona ukuba mangaphi amaxesha amabinzana athile angena kuwo, iyasebenza ke.
Ndicinga ukuba "ndiyasebenza ngokhonkolo" kodwa bendilindele ukuba xa ndibeka "iilolipops" ukuba injini iyakukhangela indibaniselwano ye "lollipops" kunye ne "sucks".
Kwaye uyazi, ukuba ubhala umamele rhoqo ngokwaneleyo, iqala ukubonakala ihlekisa…
Jan 14, 2008 ngo-9: 58 PM
Inqaku lokwenyani, uBob, yayikukwakha into edityaniswe ne-API ye-Twitter. Andizange ndiyenze ngaphambili kwaye ndifuna ukusebenzisa ingqondo yam (encinci).
Okonwabisayo kukubukela nje oko abantu bacinga ukuba kukufunxa- ukusuka kwimbonakalo yakutshanje ukuya ekujongeni ixesha elide. Sele ilandelwe kancinci kwi-Twitter, apho abantu bayisebenzisa ukukhupha malunga nomsebenzi, ubomi, itekhnoloji, njl.
Ukuyijonga yeyona nto inomdla kum. Njengonogumbe wezithuba ezinxulumene neNFL ngexesha lemidlalo yebhola. Ngokwenyani abantu babephuma kwisicelo!
Okungakumbi okuzayo kolu hlobo lwesicelo. Ngokwenyani yayiluvavanyo nje, i-app yokwenyani iya kuba yinto encinci ezantsi kwendlela!
Jan 15, 2008 ngo-3: 08 PM
I-Twitter kufuneka ife